Isitampu se-LAMP kwi-Windows Subsystem ye-Linux > UVielhuber uDavid
Isitampu se-LAMP kwi-Windows Subsystem ye-Linux11
Xa ufuna bume yophuhliso eyiyo, Windows 10 inika izisombululo epheleleyo ezifana XAMPP , WAMP kunye MAMP , ufakelo lweenkobe ngesandla, kunye nezisombululo lweeHedfowuni ezifana Vagrant ( yeScotch Ibhokisi ) kunye Docker ( Devilbox , Laradock ). Kodwa ngenxa yeemfuno zam ezinje ngokuqwalaselwa simahla, izatifikethi ze-SSL zekhadi lokwenyani, ukufikelela kuzo zonke izixhobo zokuphela kwenethiwekhi yendawo kunye nokuzinza okuphezulu kunye nokusebenza, zonke izisombululo zisilele-ngaphandle kwesinye.
Ndizamile ngazo zonke izinto ezahlukeneyo (ngakumbi ngeDocker) kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo kwaye ndancamathela kuLando . Kodwa kwavela ukuba zonke i-Docker (kunye neVagrant) -ezisisiseko esisisiseko sezizathu zokusebenza phantsi kweWindows kunye neMac aziloncedo kwiiprojekthi ezinenani eliphezulu leefayile ( umbono wephepha uthathe malunga nemizuzwana engama-25). Kukho intambo emininzi apha kwaye apha kwaye apha ixoxa ngonobangela kunye nezisombululo ezinokubakho .
Kum, bekusoloko kukho iipilisi ezininzi zokuginya- iifayile akufuneki zihambelane ngesandla, kodwa zifumaneke ngokulula. Andifuni nokubuyela kwi-MAMP PRO endandiyisebenzisa iminyaka (ngakumbi uloyiko phantsi kweWindows). Ke ndibuyele ekuqaleni ndazama kwakhona ngokuzalwa. Ngaphantsi kweWindows le yayiyinto eyoyikisayo ngendlela eqhelekileyo okanye ngeCygwin , ndide ndizame iWSL .
Sele ndinamava amahle kakhulu ngeSystem yeWindows kwiLinux kwiinyanga nje ezidlulileyo nasemva kokuba zonke iinkonzo zeLAMP zisebenza emva kovavanyo olufutshane ngaphandle kwezithintelo ngokubhekisele kuzinzo nokusebenza, ndafika kwisigqibo sokuba iMicrosoft iphumelele izinto ezinkulu apha. Oku kulandelwa kukuseta kwam (okwandisa rhoqo) kubandakanya zonke iincwadi zeempendulo kwindawo yam yophuhliso lwangoku phantsi Windows 10 Pro: